Ndingabata sei SEO Instagram?
Hapana chikonzero chekutaura iyi yakawanda-inonyanya kubudiswa paIndaneti, apo munhu wese anokwanisa kunzwa sepurogiramu yehupfumi. Pano panouya Instagram pachayo, ichipa mamiriyoni anopfuura mamiriyoni 50 akagoverwa zuva rimwe nerimwe. Uye vateereri vamire vevanyori pa Instagram vanoramba vachiwedzera, sezvo vanhu vakawanda uye vakawanda vanoziva ruzivo rwakasiyana rwevashandisi, ruchienderana nechinangwa chekupikisa, uye nekubudirira kuyananisa zvikamu zvepamusoro zvehutano hwakanaka hwevanhu. Ndicho chikonzero pfungwa ye Instagram SEO yekusimudzira simba rechigadzirwa, kuwedzera kwehupenyu hwehutano hwemagetsi, kana imwe imwe yemakambani ekutsvaga kudhinda kwepuratifomu haisi kureva mhedziso mutsva.
Ita kuti uzive zvakasimba zita rako rezita
Chaizvoizvo, Instagram inopa chikwata chakanakira shamwari kuti igovana zvifananidzo, zviripo nokuda kwekugadzirisa nemigumisiro yakasiyana kana tsvina, pamwe nekugadzirira kuvhara ne hashtags kubvumira kutsvaga kutsvaga kwevashandi vose. Kunyangwe chero unyanzvi hwekufotora hunogona kuwanikwa pano - kutangira pane selfies nemamwe mafiriji evevintage, kuti uwane unyanzvi hwekutsvaga mu-photo studio. Izvozvo zvinoreva kuva ne-social social account pa Instagram zvinogona kuita kuti bhizinesi rako riwedzere kutengesa mikana inotaurira kune vanotengesa vatengi pane imwe nzvimbo yega.
Kuteerera chero imwe nhoroondo yezita rega pane Instagram chinhu chakanaka chiri nyore. Zvisinei, unofanira kufungisisa zvinhu zvinotevera usati wapinda mubhizinesi. Chokutanga pane zvose, hapana chidipo pano kuparidzira zvigadzirwa zvemhando zvinomiririra marashi yako zuva rega rega. Pfungwa huru yebasa ndeyokuti kutarisa kwepanyama kwakapiwa mumufananidzo, mhinduro yakasimba iyo inowanikwa. Ingoita kumboita nenzira yepamutemo, sezvo vashandisi havazombotarwi neizvozvo. Pakati pezvinhu zvakajairika zvekuita, sekufunga pamusoro pekuona mhinduro uye nezvimwe zvakadaro, usangokanganwa kuvhara purogiramu yako yakangobva kusikwa nekunyoresa kusanganisa kuibhizinesi yako yebhizimusi website.
Taura kugamuchirwa kumakwikwi
Kuita makwikwi emifananidzo pa Instagram ingangodaro nzira yakajeka yekusimbisa nzvimbo yako yepaIndaneti, yeuka chero munhu wese anoshanda muchiitiko chako achangotanga kukurudzira marashi yako ne hashtag uye vateveri vake kana shamwari. Uye itsika ine utano kuti iite nhamba inoramba ichikura yevateveri. Paunenge uchikumbira ma-hashtag, ndinokurudzira kuti vateereri vazive zvinonyanya kukosha mavhiki mashomanana vasati vauya chiitiko. Kuita kuti kukwikwidza kwako kuwedzere kushanda, usaisa rupiro pakupa mubairo wakajeka wekusimudzira upenzi chaiwo. Nokudaro, iwe uri kuenda kunzvimbo yakanaka yekuparidzira usingashandisi zana, asi iwe unogona kunzwa hupenyu chaiyo uye zvaunofarira zvezvinangwa zvako.
Ita zvakawanda, zvibatanidza zvakawanda, uye magetsi ehupenyu achakura
Pfungwa huru pano iri kufunga nezve hashtags pane Instagram se SEO keywords uye meta tags. Yeuka, unenge uri "Instagram SEO" unoda kushingaira kwakakwana uye nekugadzirisa nguva dzose kunobatanidzwa nemisoro yako huru nevateveri vakakodzera. Ingobhadhara nguva yakakwana yekuchengetedza purogiramu yezvimwe zvinonakidza zvinyorwa zvinyorwa uye mhinduro dzemhinduro nokukurumidza. Hapana chikonzero chokuzvidya mwoyo - zvinyorwa zvepakutanga zvinyorwa zviri kuita zvakanaka paIndaneti SEO, sezvinongoita imwe nzira dzetsika dzekugarisana nevamwe. Cherechedza, zvisinei, kuti Instagram ndiyo nzvimbo yekugoverana zviyeuchidzo, gara uchienda kune imwe nguva nemafambisirwo emazuva ano, uye mifananidzo yakakodzera-mifananidzo kana mabasa Source .